Yintoni iNtengiso esekwe kwiAkhawunti yeB2B? | Martech Zone
Yintoni iNtengiso esekwe kwiAkhawunti yeB2B?
NgoLwesibini, Novemba 4, 2014 NgoLwesibini, Agasti 1, 2017 Douglas Karr
Ngaba iqela lakho lokuthengisa livakalelwa njani ngentengiso yakho? Nanini na xa abathengisi be-B2B bebuzwa loo mbuzo, iimpendulo ziyindalo iphela. Abathengisi baziva ngathi bagoba ngasemva ukuhambisa isixa esikhulu sezikhokelo, kwaye ukuthengisa ngokucacileyo akuziva uthando. Utshintshiselwano luya kwinto enje.
Ukuthengisa: Sihambise ii-1,238 zeNtengiso eziKhokhelayo ezifanelekileyo (MQLs) kule kota, 27% ngaphezulu kwenjongo yethu!
Ukuthengisa: Asifumani nkxaso siyifunayo.
Ukuba oko kuvakala kuqhelekile, awuwedwa.
Ke kutheni le nto amaqela amabini azinikele kukonyusa uguquko kunye nokuvala ukuthengisa kusokola ukusebenza kunye kulwahlulo olukhulu lwe-B2B? Ngelixa abathengisi begxile kumthamo, iqela lokuthengisa lifuna ukufikelela kubaphembeleli abambalwa kwiinkampani ekujoliswe kuzo. Abathengisi be-B2B bahlala bexhomekeke tshiza uthandaze imikhankaso echitha izixhobo zenkampani, okanye ukuthengisa okwenziwa ngabantu kubandakanya iinkampani.
Ngelishwa, ukuthengisa kuyazi ukuba ukuhanjiswa kweNtengiso ekhokelayo akunakuphela njengeshishini elivaliweyo. Ngenxa yoko, abazihluphi ngokulandela ezo zikhokelo… kwaye ukukhomba ngomnwe kuyaqala.
Isitshixo sokusombulula le ngxaki kukufumana omabini la maqela kwiphepha elinye ukusuka ekuhambeni. Esi sisithembiso sokusebenzisa isisombululo esifana nesi Ibango leB2B lokuThengisa. Yisisombululo sokuphela kokuphela kokudibanisa itekhnoloji yokuthengisa kuyo yonke ifanele kunye nokwenza ngcono i-B2B.
Ngokusekwe kwiakhawunti Uhlalutyo, ubuNtu kunye neNcoko izisombululo, iqonga linika abathengisi be-B2B amandla okuqhuba iziphumo kwaye babone indlela imizamo yabo eyiphembelela ngayo ingeniso. Idibanisa ukuthengisa, intengiso kunye neCRM, evumela ukuThengisa kunye nokuThengisa ukuseta kunye nokulandelela iinjongo kubomi bonke bomthengi.
I-B2B ifuna isiCwangciso seMidlalo eyahlukileyo-ukuThengisa okusekwe kwiAkhawunti
kunye Intengiso esekwe kwiAkhawunti, uqala ngokusebenza noThengiso uchonge iinkampani ekunokwenzeka ukuba zithenge. Emva koko, uthengisa kwiiakhawunti kunye nomxholo owenzelwe wena, kwaye ulinganise impumelelo yakho kwinqanaba leakhawunti. Xa usenza njalo, amathemba aphezulu afumana ingqalelo abayifunayo ukuze bahambe ngefaneli kwaye icandelo ngalinye leeakhawunti ekujoliswe kulo lifumana imiyalezo efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. La maphulo asebenza ngokufanelekileyo kunamaphulo agxile kubungakanani, kwaye ahambisa iiakhawunti ezijolise kuzo zentengiso. Oko kuthetha ukuba ishishini elitsha livaliwe kwaye ukukhula ngakumbi kwinkampani ngokubanzi.
Ukuba awuzange ufumane i enkosi Ukusuka kwintengiso, lixesha lokuba uqalise ukwenza kwizicwangciso zokuthengisa kwiinjongo zala maqela mabini. Ayisiyiyo kuphela into yokuba ukuThengisa kunye nokuThengisa babe ngabasebenzisana ngokusondeleyo kuyo yonke imibhobho ye-B2B, kodwa ukuThengisa kunokubonisa ngokucacileyo i-ROI yemizamo yayo ngokuchasene neeakhawunti ekujoliswe kuzo.
Intengiso esekwe kwiAkhawunti ayiyiyo isayensi ye-rocket, kodwa yindlela yokwenza intengiso ephezulu, abathengi abonwabileyo, kunye nokwanda okuguqukayo. Kukwanakho ukukhokelela kwintengiso / kwintengiso yothando. Ngubani ongayifuniyo loo nto?
tags: b2bibango lesisekoilifu lokuthengisa
Abathengi bazama ukufikelela kuwe kwimithombo yeendaba, Ngaba ukhona?